Mahwendefa efiriji → Zvipfeko zvemakamuri anotonhora • Embroidery yeP & M yemakomputa
Certified furiza majaketi
Vashandi zvishandiso mu freezer jackets yemhando yepamusoro, yakachengeteka, yakatsaurirwa kushanda mumatembiricha akadzika inyaya yakakosha kune vashandirwi. Kusarudza iyo chaiyo modhi iri zvakaomakunyanya kana zvigadzirwa zvakadaro zvisina kurairwa kazhinji.
Muchitoro chedu, tinopa akanakisa mhando mamodheru kubva kune vakagadzwa vagadziri vane chekuita nekugadzirwa kwehunyanzvi zvipfeko.
Hi-Glo 25 Coldstore bhachi, chengetedza kusvika -64,2 ° C
MaJaketi furiza ari mamodheru anowanikwa mune akasiyana akasiyana, chinovasiyanisa kubva kune mumwe nemumwe kuita, dhizaini, mutengo uye chinangwa. Nekuda kwechinangwa chaicho chekusona kwavo, zvakagadzirwa zvakanaka zvemhando yepamusoro zvakashandiswa uye zvakapedzisa zvakapedzwa zvakashandiswa.
Zvese izvi kunyatso chengetedza mushandi uye kushandira kwemakore mazhinji. Imwe yemhando dzakakurumbira ndeyeHi-Glo 25 Coldstore bhachi rinopa chengetedzo pasi -64,2 ° C (inoratidzwa), yakagadzirirwa yazvino, mashanu-masisitimu sisitimu, yakagadzirirwa kuteedzera matanda akawanda emhepo.
Iyo jekete yakataurwa inosangana neiyo EN342 yakajairwa, nekuda kwayo iyo inogona kushandiswa mumatura ane tembiricha kusvika -64,2 ° C. Nekudaro, iyo modhi yejaketi yatinopa, iyo inochengetedza zvakanyanya, inodzivirira mumamiriro ekushanda kusvika -83,3 ° C kweawa rimwe riine chiitiko chepakati, uye zvichidzika kusvika -1 ° C kwemaawa masere zvine chiitiko chepakati.
Aya maitiro anoshanda kana bhachi nebhurugwa Hi-Glo 40 madungare dzakapfekwa pamwechete.
Coldstore CS-10 freezer bhachi, inodzivirira inosvika -25 degrees C.
Vagadziri vedu vakatarisa pane yakanakisa mhando uye chaiyo kupera. Zvipfeko zvinoenderana neEN 342 standard zvinopa chengetedzo yakanakisa kubva kumatembiricha akanyanya. Kushanda munzvimbo inotonhora kunoonekwa netembiricha yakaenzana kana kudzika kupfuura -5 ℃. Izvo zvakakosha kuti usarega mbatya dzichinyorova - hunyoro kana mafashama anogona kuve nemhedzisiro isingafadzi.
Mabhazi efiriji anowanikwa mumhando dzakasiyana-siyana zvinoreva kuti unogona kuwana mbatya dzakakodzerana newe. Kutengwa kwembatya dzakasimba imari inobatsira. Ichitevera kurudziro yemugadziri, inozoshanda kwemakore mazhinji iine zvivakwa zvakafanana, izvo zvinosimbiswa nevaridzi vemakambani makuru nevashandisi pachavo.
Allegro freezer bhachiallegro kutrka freezerkurtkaColdstore bhachibhachi rekushisa kwakadzikaHi-Glo bhachi - 40 madhigiriijekete rinodzivirirajeketi inoratidzira yemakamuri anotonhorachafariz kuputira bhachiCertified bhachifreezer jacketsfreezer jackets